Deganayaashu Waxay U Arkaan Sida Ellicott 370 Dredge u Shaqeyso - Ellicott Dredges Blog
Deganeyaashu waxay arkaan sida ay u shaqeeyaan (Ellicott® 370)
MUUSE LAKE - Ku dhowaad 50 dadka degan harada Moses iyo mudanayaal ayaa socod dheer u fuulay si ay u arkaan dhoobo laga soo tuuray gunta hoose ee balliga haynta.
Dhuun weyn ayaa laga soo fidiyey harada ilaa balli, biyona daadinaya.
Midabka biyaha ayaa isu badalay mid cad ilaa mugdi ah, daawadayaasha qaar waxay bilaabeen inay sawiro ka qaadaan si ay u diiwaan galiyaan sida tikniyoolajiyadu u shaqeyso.
Kala go ', isticmaalka a Ellicott Dragon Dredge 370, waxay si rasmi ah u bilaabatay Luulyo 1, 2011 markii ugu horeysay ee Muuse Lake si loo wanaajiyo tayada biyaha.
Degmada Waraabinta iyo Dhaqancelinta ee 'Lake Lake Lake' waxay dadwaynaha ku casuumeysay banaanbaxa Isniinta si ay wax uga ogaadaan mashruuca.
Mary Conrow, oo ku taal Moses Lake, ayaa ka mid ahayd dadkii daawanayay. Waxay kaqeybgashay munaasabada maxaa yeelay ninkeeda "runtii wuu xiiseynayay" howsha qodista oo su'aalo ayaa qabay.
Degane kale, Ed Buchmann, 93, wuxuu sheegay inuu ahaa Neppel beer-ka-goosad isla markaana danaynayey inuu arko hannaanka.
Kahor mudaharaadka, Rep. Bill Hinkle, R-Cle Elum, wuxuu ugu yeeray qodista "mashruuc bulsho," doodo badan, dadaal iyo xitaa xoogaa lacag dawladeed ah si ay udhacdo.
Mashruuca "runtii waa ilmahaaga iyo mustaqbalka harada Muuse," ayuu yiri Hinkle.
Rep. Judy Warnick, R-Moses Lake, waxay sheegtay in maareynta Moses Lake aysan aheyn wax cusub, maadaama ay soo socotay ilaa 1928.
Waxa cusubi waa xeerarka, noocyada duullaanka ah iyo waxyaabo badan oo madadaalo cusub leh, ayay tilmaantay.
"Waxaan u maleynayaa in dhammaantiin aad qabateen shaqo weyn oo aad uga soo gudubteen halkaan," ayuu Warnick ku yiri qeyb ahaan. "Lake Lake runti waxay ka dhigeysaa tan cidlada cidlada."
Duqa harada Moses Jon Lane ayaa ugu yeeray harada mid ka mid ah jawharada taajka magaalada.
Mashruuca qashin-qubka ayaa harada dib ugu soo celin doona waxa ay ahayd, ayuu yidhi.
Lane wuxuu u hambalyeeyay qof kasta oo mashruucan ku lug leh.
Miss Musa Lake Audrey Ramsden ayaa mashruucan ku tilmaamtay mid xiiso u leh bulshada oo ay sheegtay inay sharaf weyn u tahay ka soo qeybgalka munaasabadda.
Ron Covey, madaxweynaha gudiga agaasimayaasha waraabka degmada, wuxuu u mahadceliyey ganacsadaha Moses Lake Pamp Maiers oo u ogolaaday degmadu inay u isticmaasho hantidiisa balliyada daadka, xubnihii hore ee guddiga Richard Teals iyo Glen Rathbone iyo agaasimaha hada Norm Benson iyo Rich Archer, iyo bixiyeyaasha.
Intii lagu gudajiray su’aasha iyo jawaabta, Columbia Basin Herald Publisher Harlan Beagley wuxuu weydiiyay hadii muuqaalka kore ee ciidda salka ciidda u dhow gudubka harada ay badali doonto jiilaalka.
Bayoolaji Ryan Walker, oo ka tirsan Grette Associates Environmental Associates, ayaa sheegay in isbeddel jiri doono, taas oo ku xidhan wax soo saarka qodista.
Mushaharka laguma dhisi doono sagxadda uu hadda marayo, Walker ayaa sidaas yidhi.
Warnick wuxuu wax ka waydiiyay saamaynta ay ku yeelan karto kalluunka kalluunka iyo inay ka baxsan karaan faaruqinta faakiyuunka.
Xawaaraha faakiyuumku ma badna waxaana la filayaa in xaaladaha kalluunka ay hagaagi doonaan, ayuu yidhi bayoolaji sare iyo maamule shirkadda Glen Grette, oo ka tirsan Grette Associates Environmental Associates.
Waxaa sidoo kale la weydiiyay sida qoto-dheer qulqulka loo qabtay.
Walker wuxuu yiri inta u dhaxaysa cagaha 8 iyo 20 cagaha.
Dhamaadka munaasabada, Gudoomiyaha Hiigsiga 2020 Bill Ecret wuxuu gudoonsiiyay Curt Carpenter, Maareeyaha Waraabka ee Moses Lake iyo Maamulaha Degmada, Abaal Marinta Himilada Luulyo ee mashruuca.
Waxaa laga daabacay Columbia Basin Herald
Ku bilow Mashruuca Dayactirka Haradaada Ellicott